Kubatana 2020.1 Linux Vakapindwa muropa
Kubatana 2020.1: nyowani girazi injini yekuvandudza yakaburitswa
Unity Technologies ine kuburitswa kutsva kwaunoda, ndiyo vhezheni yazvino yeUnity graph injini yayo. Ndizvo nyowani vhezheni Kubatana 2020.1 inouya yakatakurwa nezvinhu zvitsva uye zvimwe zvikwata zvine zvigamba. Iwe unotoziva kuti haisi graphical Unity shell, iyo yaishandiswa paGNOME yeUbuntu, asi mune ino chirongwa chakasiyana ...
Uku ndiko kuburitswa kwekutanga kwakarongerwa gore rino, saka zvimwe zvichauya gore risati rapera. Mune ino gadziriso ini ndatoziva kare vakaita nhanho huru izvo zvinofadza multiplatform vhidhiyo yemitambo vanogadzira vachishandisa iyi injini injini. Iwe unotoziva kuti maviri anovhurwa anoitwa mukati megore rega rega, imwe ndiyo TECH, inova iyi, panobatanidzwa nhau dzichangoburwa, uye imwe iri iyo LTS, ndiko kuti, iyo Long Term Rutsigiro vhezheni uye kuti kugadzirwa kuve kwakawanda yakadzikama.
Chinhu chinomira pamusoro peichi chitsva Kubatana ndechekuti inouya nemabhugi mazhinji akagadziriswa, mazhinji acho yakabata zvakananga Linux. Ndeipi nhau huru. Zvakare, kune zvimwe zvinonakidza zvinowedzera kutsigiro yayo yeVulkan graph API. IL2CPP tsigiro yakawedzerwa yeLinux.
Asi kana paine imwe kumberi inomira pamusoro pevamwe vese, ihwohwo Kubatana inowana Bolt semaonero ekuraira akanyorwa naLudiq. Naizvozvo, ikozvino ichave ichiwanikwa zvachose mahara kune vanogadzira vachishandisa Kubatana. Pasina mubvunzo chinhu chinobatsira-chinowedzera icho chinokutendera iwe kudhonza uye kudonhedza zviitiko pane mitsara-ne-mutsara zvinyorwa ... Kana iwe uchida kuziva zvakawanda iwe unogona kuona ino chinyorwa muChirungu. nezve Bolt.
Uye zvechokwadi, kuziva padyo neprojekti kana kurodha pasi chero shanduro dzayo, unogona kuenda kuzviri pamutemo webhusaiti. Rangarira kuti inowanikwa yeLinux, macOS uye Windows, kunyangwe ichigona kugadzira mitambo yemavhidhiyo emapuratifomu akawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Kubatana 2020.1: nyowani girazi injini yekuvandudza yakaburitswa